'५/७ वर्षदेखि फाइनान्स कम्पनीहरुमा तरलताको समस्या छैन' Bizshala -
'५/७ वर्षदेखि फाइनान्स कम्पनीहरुमा तरलताको समस्या छैन'
नेपाल राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृति प्राप्त तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीहरुमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको पुँजी, निक्षेप तथा कर्जाको आकार र नाफाको हिसाबमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीमा पर्छ आइसीएफसी फाइनान्स ।
काठमाडौंको टंगालमा मुख्य कार्यालय रही काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर गरी कुल १७ शाखामार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको आईसिएफसि फानान्स लिमिटेड यसको संस्थागत विकास तथा कारोवारको आकारमा भइरहेको प्राकृतिक बढोत्तरीले गर्दा नेपालको समग्र फाइनान्स कम्पनीहरुमा एक सबल, सक्षम र भरपर्दो कम्पनीको रुपमा आफूलाई स्थापति गर्न सफल भएको छ । यस उत्कृष्ट फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सुनिल पन्तले बागडोर सम्हालेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
नेपाल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी(हालको एनएमबी बैंक)बाट बैंकिङ्ग करिअर सुरुवात गरेका पन्तले त्यहाँ छँदा सिस्टम र ट्रेजरी विभाग हेर्ने गर्थे । एनएमबिको ६ वर्षको अनुभव पछि त्यस समय सञ्चालनमा आउन लागेको माछापुच्छे बैंकमा सेवा प्रवेश गरेर उक्त बैंकको विभिन्न शाखा, विभागहरुमा कार्य गर्दै अन्त्यमा ट्रेजरी मेनेजरको भूमिकामा रहेर ६ वर्षको कार्यकाल व्यतित गरेको उनले सम्झिए । आजभन्दा १३ वर्षअघि सहायक महाप्रबन्धकको रुपमा आइसीएफसीमा आबद्ध भई विषम परिस्थिति र बजारको उतारचढावका बीच पनि कम्पनीको प्रगति, उन्नति र पहिचानको एक हिस्साको रुपमा निरन्तर कार्यरत पन्त हालैदेखि सीइओको रुपमा कार्यरत छन् । पन्तले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका हुन् । प्रस्तुत छ पन्तसँग बिजशालाको तर्फबाट भक्तराज रसाइलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
भर्खरै सीइओको कमाण्ड सम्हाल्नुभएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
-सुरुवातीको मेरो बैंकिङ्ग करिअर अहिलेजस्तो प्रतिस्पर्धा थिएन । पहिले बैंकहरुको संख्या सीमित थियो, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वृद्धिका कारण यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । नियमन निकायले पनि नियम र निर्देशनको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको र बजारमा जोखिमहरुको मात्रा पनि बढ्दै गएका कारण ससाना काम पनि धेरै विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हरेक साल नेपाल राष्ट्र बैंंक, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकले संस्थाले गरेका काम कारवाहस्रुको सूक्ष्म रुपमा Off-Side र On-Side निरीक्षण गरिरहेका हुन्छन् । नियामकले सुक्ष्म रुपमा निरीक्षण गरिरहेका हुनाले व्यवसायमा पारदर्शिता समेत वृद्धि भएको छ ।
फाइनान्सलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?
हाल नेपाल तीव्र आर्थिक वृद्धि सहित विकास निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र निर्माणसँगै धेरै विकास कार्य भइरहेका छन् । चुनौतिका साथसाथमा अवसर पनि बग्रेल्ती देखिरहेको छु । एउटा सीइओको नाताले भन्नुपर्दा वासलात, शाखा, प्रडक्टहरु जस्ता कुराहरुलाई समेटेर संस्थाको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गदै सस्टेनेबल ग्रोथको दिशामा लैजाने भावी कार्यदिशा बनाएको छु ।
राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स भए पनि पूर्व पश्चिमतर्फ शाखा बिस्तारमा खासै ध्यान दिनुभएको देखिएको छैन, किन यस्तो ?
मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि हामी सञ्चालन जोखिम र संस्थागत सुशासनमा अलिक बढि नै सजग छौं । यसो भन्दै गर्दा व्यवसाय तथा शाखा नै नबढाएको पनि हैन । काठमाण्डौं उपत्यका भित्र मात्रै ६ वटा शाखा र देशको विभिन्न स्थान जस्तैः चितवन, भैरहवा ,रुपन्देही, कपिलवस्तु, स्याङ्गजा, त्रिशुली, रसुवा तथा बनेपा लगायतका ठाउँमा गरी ११ शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । पूर्व तथा पश्चिम तिर पनि शाखाहरु विस्तार गर्ने सोच चाहिँ पक्कै हो, सञ्चालन जोखिम र आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी विकास तथा सीमित स्रोतसाधनका कारण पनि विस्तार र विकासमा हामी अर्गानिक रुपमा अघि बढेका हौं । हामी सम्भाव्यतालाई सूक्ष्म परीक्षण गर्दै शाखा विस्तारमा जोड दिन्छौं । अहिले १७ वटा शाखा र शाखा भएका ठाउँमा प्रायः एटीएम र अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा मार्फत ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
आइसीएफसीले राज्यलाई कसरी टेवा पुर्याइरहेको छ ?
हामीले आफ्नो तर्फबाट वित्तीय संस्थाले खेल्नुपर्ने भूमिका निभाएका छौं । नेपाल सरकारको बजेट, नेपाल राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य र निर्देशन लगायतको अक्षरंश पालना गर्दै विभिन्न किसिमका वित्तीय सेवा र सुविधाहरु प्रदान गर्दै बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप बढाउँदै समग्रमा देशको उत्पादन बृद्धिमा आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।
फाइनान्सहरुमा विद्यमान कमजोरी र चुनौतिहरुलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
अहिले हजुरहरुले देखिरहनु भएकै होला, फाइनान्स कम्पनीहरु धेरै नै बलिया दरिएका छन् । विगत ५/७ वर्षदेखि फाइनान्स कम्पनीहरुलाई न्यून तरलताको अवस्थाबाट गुज्रनु नपरेको अवस्था जगजाहेर नै छ । बदलिंदो परिवेशमा फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि राम्रो व्यवस्थापनको प्रवेशका कारणले राम्रै हुँदै गइरहेको पक्कै छ । चूनौतीका रुपमा भन्नुपर्दा आफ्नै फाइनान्स कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा मुख्य हो । अर्को हिसाबले हाम्रो मार्केट नै फरक भएकाले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसंग खासै चूनौति छ जस्तो लाग्दैन ।
आइसीएफसी फाइनान्सबाट सेवाग्राहीहरुले वाणिज्य बैंककै सेवा पाइरहेका छौं पो भन्ने गरेका सुनियो ?
खासमा हामी आफूले आफैलाई राम्रो भन्ने भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरे बमोजिम हामीले प्रवाह गर्ने सेवा तथा सुविधाले ग्राहको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नमै केन्द्रीत हुन्छौं । अझै भन्नु पर्दा उत्कृष्ठ सेवा र सुविधामार्फत सधैं ग्राहकको मन जित्ने कोशिशमा हुन्छौं । यो सुन्दा मलाई पनि खुशी लाग्यो ।
सेयर लगानीकर्ताहरुले आइसीएफसीबाट कस्तो किसिमको आश गर्नसक्लान् ?
सेयरधनीहरुलाई निरन्तर प्रतिफल दिइरहेका छौं नै, यसका अलावा हामीे सस्टेनेबल ग्रोथमा बढी विश्वास गर्दै अघि बढिरहेका छौं । यद्यपि हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै ग्राहकको सन्तुष्टि हो । सेयरधनीहरुलाई पहिलेको भन्दा कम नहुने गरी प्रतिफल दिनेछौं ।
पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा ब्याजदरको लिगलिगे दौडमा ब्याजदर स्थिरता नहुनुमा को दोषी देख्नुहुन्छ ?
ब्याजदरका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्रबैंकले ब्याज यति नै हुनुपर्छ भनेर कहिले भन्दैन, यो ओपन र फ्री मार्केट हो । पछिल्लो समयमा ब्याजदर निक्षेपमा आशा गरेभन्दा माथि गएकै हो । केही हदसम्म विभिन्न तथ्यांकहरुले दाबी गरे मुताबिक राज्यले पूँँजीगत खर्च सोचेअनरुप नभइरहेको अवस्थो हो । मौद्रिक नीतिले २५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नेलक्ष्य लिएकोमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहिलो त्रैमासमा नै १५ देखि २० प्रतिशत सम्मको ग्रोथ लिएको कारणले सम्पत्ति र दायीत्वमा असन्तुलन भई त्यसको प्रेसरले पनि ब्याजदर माथि गएको हो । मेरो विचारमा अब सबैले दीर्घकालीन विकासका नजरले हेर्नुपर्छ र यो नै समाधान हो । वास्तवमा नाफा कमाउने अस्वस्थ होडबाजीका कारणले पनि यो विकराल स्थिति सिर्जना भएको हो । माग र आपूर्तिमा आपसी तालमेलमा ध्यान दिएको खण्डमा समाधान हुनसक्छ ।
बचत र ऋणमा कस्तो किसिमको ब्याजदर कायम गर्नुभएको छ ?
हाम्रो बेसरेट १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । आजको मितिसम्म बचतमा ८ प्रतिशतसम्म र ऋणको प्रकृतिअनुसार १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेका छौं ।
पछिल्ला समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रेडिट ग्रोथ बढिरहेको सन्दर्भमा समाधान के हुनसक्छ ?
संयम नै निर्विकल्प उपाय हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्रबैंकले त केबल लाइसेन्स दिने र आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थाहरुले गरेका काम र कार्यबाहीहरुको निगरानी गरी एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन र बोर्डले बुद्धिमतापूर्ण तवरले वासलातको ग्रोथलाई प्राकृतिक बनाउन ध्यान दिन जरुरी ठान्दछु ।
वर्तमान समयमा तरलताको विकराल अवस्थाले गुज्रनुपरेकोमा तपाईंको धारणा कस्तो छ ?
अहिले ब्याजदरका कारणले पैसाको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको अवस्था हो । यही अवस्था नै अहिलेका लागि विकराल हुने स्थिति पैदा हुने कारक तत्व हो ।
हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाएर बसेकाहरुले एउटा शर्तानुसार संयमित भएर काम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्रबैंकले लिएका हरेक आर्थिक लक्ष्यहरुलाई हामीले सहयोगी भएर देशको आर्थिक विकासमा आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल दिंदै काम गर्ने हो र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छु ।